Sacuudiga iyo xulafadiisa oo dub u soo celiyay xidhiidhka Qadar | Berberanews.com
Home WARARKA Sacuudiga iyo xulafadiisa oo dub u soo celiyay xidhiidhka Qadar
Sacuudiga iyo xulafadiisa oo dub u soo celiyay xidhiidhka Qadar
Sucuudi-(Berberanews)-Xidhiidhkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Qadar iyo afar waddan oo carbeed ayaa dib loo soo celiyay, kaasoo waddanka Qadar xayiraad saarayay muddo ka badan saddex sano ah, sida uu sheegay wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sacuudi Carabiya.
Amiir Faysal Bin Farhad ayaa warfidiyeenka u sheegay in dalalku ay isku waafaqeen in ay dhinac iska dhigaan khilaafka u dhaxeeya kaddib markii ay isugu tageen shirka khaliijka maalintii salaasada.
Inta aan go’aankaas lasoo saarin ka hor, Dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan ayaa meel fagaare ah laabta ku galiyay amiirka Qadar, Tamin Bin Xamad Al-Thaani
Sacuudi Carabiya, Isu tagga Imaaraadka Carabta, Baxreyn iyo Masar ayaa Qadar xidhiidhka u jaray sanadkii 2017-kii, kaddib markii ay ku eedeeyeen in ay taageerto ururrada argagixisada.
Qadar oo ah waddan yar oo hodan ku ah kheyraadka gaaska iyo saliidda ayaa beeniyay eedeymaha loo jeediyay, wuxuuna ku gacan seyshay shuruudo loogu xiray in laga qaado xayiraadda ay kusoo rogeen dalalka kale ee khaliijka.
Arrimaha laga dalbaday waxaa ka mid ahaa in albaabbada la isugu dhufto telefishinka Al-Jazeera ee uu fadhigiisu yahay magaalada caasimadda ah ee Dooxa.
Waxaa kale oo qadar laga dalbaday in ay cadaawad la sameysato dowladda Iiraan.
Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, dalalka Kuwait iyo Mareykanka ayaa waday dadaallo ay kusoo afjarayaan ismariwaaga ka dhaxeeyay waddamada carabta.
Shirkii Talaadada oo ka dhacay xarunta dhaqanka Sacuudiga ee al-Culaa, ayey hoggaamiyeyaasha lixda waddan ee Khaliijka ku saxiixdeen heshiis uu Dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan, ku qeexay mid adkeynaya xidhiidhka iyo xasiloodida dalalka carabta.
“Maanta waxaan aad ugu baahan nahay inaan mideyno dadaalladeenna, si wadajir ah u hormarinno gobolkeenna islamarkaana meel qura uga soo wada jeedsanno caqabadaha nagu hareereysan, gaar ahaan khatarta nuclear-ka ee xukuumadda Iiraan iyo qorshayaasheeda gurracan,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Markii dambena, Amiir Faysal oo ah wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sacuudiga, ayaa shir jaraa’id ku yidhi: “Waxa maanta dhacay waa in baal cusub loo rogay dhammaan arrimihii naga dhaxeeyay dibna loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed.”
Habeennimadii Isniinta ayey dowladda Sacuudiga oggolaatay in ay xuduudaheeda dhulka, badda iyo hawada u furto Qadar.
Muxuu ku saabsanaa khilaafka?
Qadar waxay muddo dheerba ku dhaqmeysay siyaasado ay ku hormarineysay xiriirkeeda arrimaha dibadda, iyadoo saaxiib la ahayd waddamo ay cadaawad kala dhaxeyso dalalka kale ee Khaliijka. Laakiin waxaa jiray labo arrimood oo waaweyn oo dalalka dariskeeda ah ka careysiinayay tobankii sano ee lasoo dhaafay.
Mid waa in Qadar ay taageerto ururrada Islaamiyiinta ah. Dowladda Qadar way qiratay inay garab istaagtay oo caawisay kooxaha islaamiyiinta ah ee ay dalalka dariskeeda ah u arkaan ururro argagixiso ah, gaar ahaan ururka Ikhwaanul Muslimiin.
Bale waxay mar walba beenisaa in ay taageerto kooxaha jihaad doonka ah, sida Al-Qaacida iyo Dowladda Islaamiga ah (IS).
Arrinta labaad ee muhiimka ah waa xidhiidhka ay Qadar la leedahay Iiraan, kaasoo ay kula wadaagto ceelka gaaska ee ugu weyn adduunka.
Dowladda Iiraan ee ay Shiicada maamulaan waa cadowga ugu weyn ee ay gobolka Bariga Dhexe ku leedahay dowladda Sacuudiga ee Sunniyiintu ay maamulaan.
Yaa xidhiidhka u jaray Qadar?
Bishii June ee sanadkii 2017-kii, dalalka Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Baxreyn iyo Masar ayaa u jaray dhammaan xidhiidhadii diblomaasiyadeed iyo kuwii ganacsiga.
Waxaa la xishay halkii xad ee ay Qadar ku lahayd dhulka; maraakiibtii uu calankeeda ka dul babbanayay ama kuwii adeegyada u waday Qadar ayaa laga mamnuucay in ay isticmaalaan dakado faro badan; inta badan hawada gobolkana waxaa laga xiray diyaaradaha Qadar.
Waddamadan waxay Qadar u soo bandhigeen 13 shuruudood oo ay ku xireen in ay xayiraaddaas ka qaadaan.
– In la xidho Telefishinka caanka ah ee Al-Jazeera iyo warbaahinno kale oo ay Qadar maalgaliso.
– In ay Qadar hoos u dhigto xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ay la wadaagto Iiraan.
– In la xidho Saldhigga Milatari ee uu Turkiga ku leeyahay Qadar.
– In ay Qadar joojiso faragalinta ay ku sameyso arrimaha gudaha ee waddamada kale.
Dowladda Qadar way diidday dhammaan shuruudahaas, waxayna sheegtay in aysan “isdhiibi doonin” xornimadeeda qaranna uga tanaasuli doonin “xayiraadda” lagu soo rogay, dalalka dariska la ahna ay ku xad gudbeen shuruucda caalamiga ah.
Waxay durba aasaastay xidhiidh ganacsi oo ay la sameysatay waddamada Iiraan iyo Turkiga si ay u xaqiijiso in shacabkeeda tiradoodu tahay 2.7 milyan ay helaan adeegyada aasaasiga ah.
Waxay saliiddeeda iyo gaaska ay soo saarto u adeegsatay in ay sare ugu qaaddo dhaqaalaheeda.
Labo waddan oo ka mid ah Khaliijka ayaan Qadar u jarin xiriirka – waana Kuwait iyo Cumaan. Kuwait waxay qeyb ka ahayd dagaallada heshiisiinta.
Amiirka Qatar oo tegay Sucuudi Arabia
Previous articleBuuhoodle: Guutada 130 aad ee Ciidanka Qaranka oo cabanaya
Next articleUganda Airlines to start direct flights to Hargeisa-state media